अक्सर यो वाइफाइ काम दायरा sorely अभाव छन् हुन्छ। अझ शक्तिशाली राउटर वा छत नजिकै कतै कमजोर आवास को खरीद, तर केवल हामी उपकरण सिस्को र ZYXEL कुरा छैन यदि यो सधैं मदत गर्दैन - प्रयोगकर्ता अनौठो निर्णय पाउन। एकदम सजिलो प्रयोगको लागि वाइफाइ को कवरेज क्षेत्र वृद्धि गर्न, जो तपाईं कसरी केबल मार्फत रूटर गर्न राउटर जडान गर्न बताउँछ यो लेख, सिर्जना यो समस्या समाधान गर्न।
जहाँ तार राउटर प्रयोग गरिन्छ नेटवर्क सिर्जना गर्न, यो नै यन्त्र प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ, र यो उपलब्ध प्रविधिहरू को मात्र होइन अनुकूलता छ। स्थापना र समान routers जडान धेरै सुविधाजनक छ। पछिल्लो कार्य रूपमा, खरीद विशेषज्ञहरु अनुमार्गण क्षमताहरु बिना राउटर र धेरै सस्तो पहुँच बिन्दु खरिद गर्न सिफारिस गर्छौँ पैसा बचत गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूलाई - संकेत रिले गर्न।
नेटवर्क "राउटर-राउटर" दुई संस्करण उपलब्ध छ - तार र वायरलेस च्यानलको लागि। स्वाभाविक, केबल द्वारा जडान मात्र थप विश्वसनीय छ, तर पनि एकदम माथि 100 मीटर को कवरेज दायरा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। वायरलेस च्यानल सीमित संकेत शक्ति र ओभरल्याप पर्खाल - संकेत गुणस्तर लागि मीटर कुनै थप 10 भन्दा। तसर्थ, संगठन "मुड जोडी" केबल जडान गर्न आवश्यक हुनेछ लागि, लम्बाइ आवश्यक कनेक्टरों दुवै पक्षलाई crimped।
ज्ञान निरर्थक छैनन्
अक्सर पनि उन्नत प्रयोगकर्ता नेटवर्क उपकरणहरू कन्फिगरेसन सम्बन्धित समस्या को एक नम्बर छ। सारा समस्या - किनभने राउटर निर्माता बीच बेमेल को। त्यसैले, धेरै आईटी पेशेवरों विवरण कुनै पनि हार्डवेयर सेटिङहरू अघि यी निर्देशनहरू पढ्नुहोस् सुझाव। रूटर परिवर्तन गर्न मदत गर्न सेटअप विजार्ड लागि आशा, कहिलेकाहीं जानकारी राम्ररी सञ्चालन मा उपकरण चलाउन पर्याप्त छ, छैन।
पहिले कसरी राउटर जडान गर्न एक पीसी वा कन्फिगर गर्न नोटबुक गर्न TP-LINK डी-लिङ्क वा, हामी तपाईंलाई तिनीहरूलाई शक्ति अक्सर हुन्छ पेश र पूर्ण लोड लागि प्रतीक्षा (20-45 सेकेन्ड), वा, सिफारिस, उपकरण नोटिस सक्छ एक कि यो लैन पोर्ट केही उपकरण जडान।
सेटिङहरू पहुँच को संगठन
प्रश्न पछि लाग्ने: "कसरी म रूटर राउटर एउटा केबल मार्फत जडान गर्छन्" - तपाईंले आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटप परिवर्तन गर्न रूटर जडान गर्दा धेरै प्रयोगकर्ताहरू समस्या सामना गर्न सकिन्छ। जडान उपकरणहरू नै नेटवर्क हुनुपर्छ कन्फिगर गर्न - सञ्चालन प्रणाली वा उपकरण को निर्माता बिना केवल एक आवश्यकता छ। मात्र दुई समाधान:
रूटर सेटिङ कारखानामा DHCP-सर्भर मानार्थ छ। सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि आदर्श स्वतः आईपी-ठेगाना प्राप्त गर्न कम्प्युटर निर्देशन मात्र आवश्यकता।
तर DHCP सर्भर routers केही मोडेल असक्षम दोष आफ्नो हात र टाउको काम गर्न प्रयोगकर्ता गर्नेछ छ। यो कुनै ठूलो सम्झौता छ, तर राउटर मा एक अधिकृत प्रविष्टि पूरा गर्न कसरी विस्तृत निर्देशनहरू, चोट गर्न सक्दैन।
कम्प्युटरमा गतिशील ठेगाना सेट
रूटर र गतिशील नेटवर्क ठेगानामा आफ्नो कम्प्युटर आदेश दिन पहुँच बिन्दु आवश्यकता को सेटअप प्रवेश गर्न नसक्नुको सक्षम DHCP सर्भर को मामला मा। तपाईं कार्यहरू निम्न अनुक्रम प्रदर्शन गर्न आवश्यक एक पीसी मा यो गर्न:
"मुख्य नेटवर्क व्यवस्थापन केन्द्र।" - "नियन्त्रण कक्षमा" केही प्रणाली मा, यो अनुक्रम वस्तु "सञ्जाल र इन्टरनेट" समावेश छ।
"एडप्टर सेटिङहरू परिवर्तन"।
वैकल्पिक प्रेस सक्रिय जडान मा माउस बटन र "गुण" चयन गर्नुहोस्।
यस TCP / IPv4 वर्ण समावेश लाइन फेला पार्न र क्लिक "गुण।"
अर्को लाइन "स्वतः प्राप्त गर्नुहोस्" गर्न दुई क्षेत्रहरू चेक बक्से चयन गर्नुहोस्। सुरक्षित निस्कन।
पाँचौ अनुच्छेद मा सेटिङ परिवर्तन गर्नु पहिले यो एक नोटबुक मा सेट मान सुरक्षित गर्न वा स्क्रिन शट बनाउन सिफारिस गरिएको छ - संभवतः त्यहाँ लागि दुई routers कन्फिगर छन् पछि इन्टरनेट पुनःस्थापित गर्न दर्ता सेटिङ हो।
रूटर जडान कम्प्युटर को statics स्थापना गर्न
घर लागि राउटर असक्षम चेतावनी हुन सक्छ DHCP सर्भर। त्यसैले तपाईं एक उपकरणमा आउँछ जो निर्देश, पढ्न र राउटर को आईपी-ठेगाना पत्ता लगाउन छ। उदाहरणका लागि, ठेगाना फेला परेन - 100.333.24.15, र मास्क 255.255.248.0 छ। प्रयोगकर्ता कम्प्युटर नेटवर्क सेटअप उपयुक्त दर्ता गर्नै पर्छ। एक भेद मात्र अन्तिम अंकको आईपी-ठेगाना मा हुनु आवश्यक छ, उदाहरणका लागि, सट्टा 16 15 सेट। अघिल्लो अध्यायमा वर्णन कार्यहरूको अनुक्रम प्रदर्शन, सेटिङ पाँचौ अनुच्छेद मा हात द्वारा गरे।
अर्को लाइन "प्रयोग" गर्न चेक बक्से चयन गर्नुहोस्।
100.333.24.16 को आईपी-ठेगाना।
रुचि DNS 100.333.24.15।
वैकल्पिक DNS खाली बायाँ गर्न सकिन्छ।
को पुनरावर्तक - तपाईं इन्टरनेटमा रूटर जडान अघि, तपाईं राउटर र के छ जो उपकरण निर्धारण गर्न आवश्यक छ। नेटवर्क केबल रूटर मा एक लैन-कनेक्टर पोर्टमा जडान र वान (इन्टरनेट) पुनरावर्तक गर्न दोस्रो कनेक्टर। कन्फिगरेसन सजिलो को लागि, दुवै उपकरणहरू आपसमा अर्को खडा गर्न बिजुली नेटवर्क समावेश गर्न र रूटर काम प्रदायक लागि कन्फिगर गरिएको छैन भने, कारखाना सेटिङहरूमा पुन: सेट गर्न आवश्यक छ।
धेरै अक्सर प्रदायकबाट प्रबन्धकहरू जब राउटर पासवर्ड आफ्नै स्थापना रक्षा अप सेट। त्यहाँ केही गलत, जस्तै राउटर वेब खुलेर खुवाउनुभयो, वा पूर्ण रिसेट बिना गर्न सक्नुहुन्न मा लैन पोर्ट रूपमा लामो छ।
कसरी एक शारीरिक स्तर मा एक केबल मार्फत रूटर गर्न राउटर जडान गर्न बाहिर आंकडा, यो सफ्टवेयर भाग आवश्यक गर्न ठीक-धुन छ। को राउटरमा DHCP-सर्भर मा सक्षम हुनुपर्छ - स्वचालित रूपमा नयाँ उपकरण नेटवर्क ठेगाना प्रदान जो जडान भएको बेला यो सेटिङ। रूटर सहज एक ल्यापटप वा स्मार्टफोन जडान गर्न भने, त्यसपछि, आईपी-ठेगाना वितरण सर्भर चलिरहेको छ। अन्यथा, तपाईं मेनुमा जानुहोस् गर्न आवश्यक , रूटर सेटिङ पत्ता लगाउन र DHCP चिनो लगाइएको ट्याब खोल्न र तपाईं बक्स "सक्षम" चिन्ह लगाइएको जाँच गर्नुहोस्। सकिएपछि, रूटर पुनः सुरु गर्नुहोस्।
तर कुनै पनि मामला मा, पुनरावर्तक कुनै प्रयोगकर्ता हस्तक्षेप आवश्यक छ। तपाईं आफ्नो सेटिङहरू जाने र ट्याब "नेटवर्क" फेला पर्छ। को Wan मेनुमा भएपछि, जडान प्रकार "गतिशील आईपी-ठेगाना" चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईं अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ वाइफाइ नेटवर्क सेट अप।
एक तार इन्टरफेस अर्को embodiment
मात्र अवस्थामा सामयिक सक्रिय भेद जब Wan (इन्टरनेट) को राउटर गर्न inoperative उपकरणहरू को एक इनपुट। त्यसपछि दुई routers को लैन-बन्दरगाह बीच केबल जडान गरेको छ। यो जडान समस्या दुई उपकरणहरू नै नेटवर्क ठेगाना प्रत्येक अन्य संग जुध्न भनेर संग नेटवर्क देखा छ। त्यसैले यो राउटर मेनु को नै नाम जाँदै द्वारा transponder DHCP-सर्भर बन्द गर्न आवश्यक छ। कि पछि, सेटिङ नछोडी, तपाईं राउटर काम गर्दछ जसमा, तर अन्तिम तथ्याङ्कले मा फरक संग नै दायरामा एक स्थिर ठेगाना पुनरावर्तक सेट फेला पार्न र लैन ट्याब आवश्यक छ। धेरै विशेषज्ञहरु 250 एकाइहरु देखि 500 वृद्धि गर्न सबनेट जडानहरू परिवर्तन गर्न सबै सिफारिस, तर घर लागि राउटर अधिक दस जडानहरू टिप्न असम्भाव्य छन्।
routers कन्फिगर लागि उदाहरण
साथै, कसरी राउटर गर्न राउटर एक केबल मार्फत, यो सजिलो नृत्य हल सेटअप कसरी उदाहरण बुझ्न बनाउन जडान गर्न।
सीधा इन्टरनेट जडान जो छ राउटर लागि सेटिङ:
नेटवर्क मास्क 255.255.255.0।
DHCP-सर्भर "सक्षम गर्नुहोस्।"
SSID - Glavnaya।
वायरलेस च्यानल = 12।
वायरलेस सुरक्षा मोड - WPA2।
दाग प्रकार एईएस।
PSK / EAP -PSK।
सेटिङहरू रिले गर्न:
SSID - Retranslator।
वायरलेस च्यानल = 1।
PSK / EAP - PSK।
यी सेटिङहरू मा, फरक प्रसारण च्यानल। यो कि पहुँच बिन्दु प्रत्येक अन्य हस्तक्षेप गर्दैन सुनिश्चित गर्न गरिन्छ। यी सेटिङहरू प्रयोगकर्ता फरक कोठा मा उदाहरणका लागि संगठित सञ्जाल, विभिन्न स्थानहरूमा इन्टरनेट आवश्यकता गर्न उपयोगी छन्। स्वचालित रूपमा routers बीच स्विच, र इन्टरनेटमा मोबाइल उपकरण सार्दा को प्रक्रिया मा noticeably प्रभावित छैन।
मदत TP-LINK गर्न
तर TP-LINK राउटर को मालिकहरूले निर्माता अन्तिम उपभोक्ता पाऱ्यो र यसको एकाइ प्रविधिको सबै विस्तार कवरेज WDS क्षेत्र भनिन्छ प्रदान किनभने, धेरै भाग्यमानी छ। यसलाई कसरी वाइफाइ लागि समान उपकरण गर्न राउटर TP-LINK जडान गर्न व्याख्या गर्न मात्र रहनेछ। पुनरावर्तक मा प्रस्तावित विकल्प सूचीमा "वायरलेस मोड" सेटिङहरू मेनुमा "को डबलयूए सक्षम" जाने र विकल्प फेला पार्न आवश्यक छ। तपाईं त राउटर सही नाम अज्ञात छ भने, राउटर गरेको SSID नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् वा "खोज" बटन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पुनरावर्तक सबै वाइफाइ यन्त्रहरू को दायरा भित्र पाता र नाम म्याक-ठेगाना पूर्ण सूची र गुप्तिकरण प्रकार प्रदान गर्नुहोस्। केवल राउटर चयन गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् हुनेछ "जडान गर्नुहोस्"। स्वचालित रूपमा जडान प्रयोगकर्ता हस्तान्तरण हुनेछ वाइफाइ, कन्फिगर पहुँच बिन्दु पत्ता लगाउने को नाम, साथै पासवर्ड र गुप्तिकरण प्रकार दर्ता गर्न आग्रह गरिने।
सर्वेक्षण देखि देख्न सकिन्छ रूपमा, नेटवर्क "राउटर-राउटर" यो पहिलो नजर मा देखिन्छ रूपमा रूपमा सरल छ। यति धेरै विकल्पहरू र नेटवर्किंग विक्रेता वा प्रदायक तयार गर्न सक्ने पासो सबै प्रकारका। कुनै पनि मामला मा, संगठन घरमा वा काम एक वायरलेस नेटवर्क सबै निर्देशन पढेर कार्य को प्रदर्शन सुरु गर्नुपर्छ। बुझ्न सामाग्री भागहरु र उपकरणहरू सञ्चालन सिद्धान्त निकै कुनै पनि प्रयोगकर्ता सेट सरल, र यो लेख मात्र जडान प्रकार निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ।
केबल जडान विश्वसनीयता, स्थायित्व र अन्य उपकरण संग अनुकूलताको लागि डाटा वर्गले वायरलेस इन्टरफेस भन्दा एकदम उच्च छ, किनभने बेवास्ता गर्न आवश्यक छैन। हो, र वाइफाइ डाटा दर मा गर्दा अझै इथरनेट पछि lags।
को GeForce 6800: विनिर्देशों, समीक्षा र प्रशंसापत्र
एक एडप्टर के हो? यसको स्कोप
गिगाबिट राउटर: मोडेल, सुविधाहरू, जडान र सेटअप। घर लागि वाइफाइ राउटर
आपूर्ति सर्किट ब्लक। कम्प्युटर बिजुली आपूर्ति एकाइ को योजना
ड्राइभ के हो? शुरुआती लागि कम्प्युटर
GeForce GTS 250: भिडियो कार्ड
बढ्दै सुनगाभाहरू र आफ्नो हेरविचार
सबैभन्दा शक्तिशाली स्थान को शक्ति मा मास्को
खोकी को हृदय लक्षण के के हुन्
कारण र छोराछोरीको atopic dermatitis को लक्षण
महिला मा Thrush। घरमा उपचार - यो वास्तविक हो?
कसरी मिमी इन्च रूपान्तरण गर्न? कति इन्च मा मिमी?
"Astaxanthin को" - यो के हो? BAA "Astaxanthin को": डाक्टर र contraindications समीक्षा
को immobilizer के हो?
निश्चित सम्पत्ति को प्रारम्भिक मूल्य: गणना सूत्र
बिग म्याक सूचकांक कसरी